Harowonews waxay xor ka tahay laaluushka, qof necaybka iyo qof jeclaysiga. Waxa u taagantahay soo gudbinta xaqiiqooyinka bulshada ka qarsoon iyo falan-qaynta wixii socda. Xaqiiqooyinka aan soo bandhignaana waxay dhibaan dadka aan daacadda ahayn ee Umadda dhibka kula dhexjira iyo inta ku taageersan.
Saylac waxa ku sugan Niman kasoo jeeda beesha Samaroon oo ka tirsan golayaasha maamulka Hargeysa, kuwaas oo Siilaanyo u ah macal-qabad. Kooxdan qawlaysatada ah waxa hogaaminaya, nin maamulka hargeysa ugu magacaaban wasiirka warshada laydhka hargeysa oo magaciisa la yiraa Crisaaq Cali Afbalaadh oo uu wehelinayo kuxigeenka gabadha wasaarada waxbarashada oo la yiraa Cali Xaamud Cali Nus iyo shan nin oo kale oo ay ka mid yihiin Cllaahi Habane (Claahi dheere) iyo Mahdi Cadar “Mahdi gees”
Waxan horey idiinku soo gubinay dhagaraha ay u socdaan nimanka reer awdal ee Hargeysa laga soo diray Iyo Shirqoolka ay reer Saylac iyo Samaroonba u maleegayaan iyaga iyo Craxmaan Saylici
Waxa kale oon idiin soo tabinay sida madaxweynexigeenku dadka u hoosaasinayo ee isagoon talo faro ugu jirin oo amarada siilaanyo fulinaya uu hadana dadka iskaga dhigayo nin ay talada Degmada Saylac isaga ka go’do oo aan marnaba ogolaanaynin in meesha la keeno wax ka duwan maxsuulkii doorashadii dalka ka dhacday ka soo baxay.
Waxad maanta ogtihiin inuuna Saylici saamayn ku lahayn qaddiyada Saylac ka socota oo uu amarka siilaanyo siiyo uun fulinayo. Wasiirada iyo xildhibaanada macal-qabadka ah waxa direy Siilaanyo Isaguna Wuu ogaa waxa ay u baxeen, oo gurigiisay ka ambo-baxeen.
Saylac waxay u baahantahay Gurmad, Arinkani waa mid ka xoog badan tobanka xildhibaan ee la doortay. Waa arrin u baahan inta daacadda ahi inay gurmad ka gasho. Waan hambalyaynaynaa Suldaan Saleebaan oo Xalay gaadhay Saylac haddii uu gurmad u yahay qaddiyada Samaroon ee Saylac.
Waa in odayada kalena 24ka saac ee socda ku xeroodaan Saylac, si xildhibaanada looga dhiciyo tuugta macal-qabadka u ah Siilaanyo, isla markaana loola qeybsado culeyska kaga imanaya Hargeysa
Harowonews horay ayay idiinku soo gudbisay khiyaamada ay la socdaan nimanka Hargeysa laga soo diray.
Ciddii u haysatay inay wanaag la socdaan ha ku quusato, dadkana hoosaasinta iyo haasaawaha beenta ah ee la leeyahay Craxman saylicibaa arrinka gacanta ku haya iyo daacadbuu ka yahayda hallaga daayo.
Craxmaan saylici qeyb buu ka yahay dibin daabyayada, waayo dadka wuu hoosaasinayaa, Nimanka hargeysa laga diray waxa ay usocdeen wuu ogaa, dadkii gurigiisa ugu tegay ee ku yiri waftigan waan ka shakinay ee maxay u baxeenna war aan jirin buu u sheegay oo wuxu ku yiri waxay soo dhaarinayaan xildhibaanada, cidda ay xildhibaanadaasi doortaan baana sharci noqonaysa ee is dejiya.
Harowonews waxay ahayd shabakadii ugu horeysay ee soo gudbisay warka nimanka saylac u socda, waxan warkooda soo tabinay markay Garba dadar marayeen, Inayna wanaag usoconna waan soo bandhignay. Waxan idiin soo tabinnay inay nimankaasi u socdaan sidii ay u kala didin lahaayeen maamulkii ay doorteen xildhibaanada Saylac. Halkan riix
Shalay waxan soo bandhignay Khiyaamooyinka iyo Dhagarta ay maleegayaan Kooxda hargeysa ka timid iyo waliba beenta ay warbaahinta marinayaan iyagoo ka been sheegaya waxa ay usocdaan. Riix halkan
Mar haddii aan ku guulaysanay inaan xildhibaanada iyo bulshadaba kasii tallaalo virus-kii ay nimankani sideen oo labadii qorshe ee ay wateeni socon waayey waxa loo baahanyahay in loo diyaar garoobo xaaladda cusub ee degmada Saylac galayso.
Haddii qorshayaasha Hargeysa laga soo maleegay midho dhal noqon waayaan Saylac waxay galaysaa xaalad ka duwan ta degmooyinka Somaliland, xildhibaanada lama dhaarinayo, wafiganna waxay ku noqon doonaan Saylac, maalmo kale ayuu arrinka Saylac sidaa sii ahaan doonaa.
Kadib waxa miiska lasoo dhigi doonaa shuruuc ka dhan ah xildhibaanada shicibku doortay iyo maamulka Saylac loo doortayba. Waxa la oran doonaa arrinka Saylac dawladu waxay u eegaysaa si gooni ah waxa lagu dhamaynayaa wax loo bixiyo “Xal Qaran” . Saylacna waxa lagu celin doonaa systemkii toban sano ka hor degmooyinka lagu maamuli jiray intii aan doorashooyinka la qaban, Waa haddii laga yeelo.
Su’aalbaa miiska taal ” Haddii codadkii bulshada rabitaanka Ciise loo baabi’iyay, maamulkii xaqa ahaa ee la doortay rabitaanka ciise loo hor istaagay, Rabitaanka Samaroonka miyaan waxba la iska saarin?
Taariikhdu way is qoraysaa, Abaal badan abaal badh ah, abaal bur iyo dheeraada, Ninba kiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni.